Iwu ITIL - Ntuzi zuru ezu - ITS Tech School
15 Ka 2017
Akụkọ banyere ITIL:
Kedu ihe bụ ITIL?
ITIL Asambodo ihe osise:
Uru nye Ụlọ ọrụ azụmahịa
Gịnị kpatara ITIL ji dị mkpa?
Ngwá Ọrụ Aka:
Na-agba ume Ka Mma Nrụ Ọrụ Ndị Na-ahazi:
Ndị ọkachamara ITIL bụ ndị ọkachamara na-achọsi ike:
Ịkwụ ụgwọ ụgwọ:
Kedu ka esi zụọ gị?
Ụlọ ọrụ IT bụ otu ihe na-agbanwe agbanwe mgbe nile, nke fọdụrụ na bit bụ isi na ohere nke onye na-atụ anya ka ọ gabiga. Maka ịmebi n'ọhịa, ọzụzụ a kwadoro bụ isi. ITIL bụ ihe edozi nke ITSM nke mmụta nke dị mkpa maka ndị ọkachamara nọ n'ọhịa IT yana ọrụ IT. ITIL nkwado ntinye aka n'inwe ihe omuma a nke na achota uzo nke di n'iru.
Ọ nwere ike isiri gị ike ịnọgide na-enye ume ọhụrụ ma ọ bụghị dị ala. Nnwale kasịnụ nke ụlọ ọrụ a bụ na ndị ọkachamara nọ n'ọhịa kwesịrị ịnọgide na-ahụ maka ụlọ ọrụ ahụ. N'ọnọdụ ebe ịmara usoro ndị na-adịru nanị ụdị ejiji nke ndị na-aga n'ihu ruo oge ụfọdụ ihe na-eme ka mmadụ dị ụtọ bụ nanị ọrụ nke ịnọgide na-eme ka mgbanwe dị iche iche na-agbanwe agbanwe. Ịmụ ihe maka uba n'ọhịa mara ya. Usoro akwukwo nke ITIL na enyere mmadu aka imeri ike n'ubi ma nyere gi aka iguzo n'ihu ndi otu.
Achọpụta ihe dị mkpa na mmetụta nke ọzụzụ ITIL n'okpuru n'okpuru a ga-enye gị ihe ngosi nke mmetụta nke a nwere ike inwe na nzube gị.
Echiche nke ITIL bụ ihe ijuanya kere na Great Britain n'etiti 1980, iji kwado ndokwa maka enyemaka IT maka òtù gọọmentị. Kemgbe mmalite ya, a natara ITIL paradaịs, gbanwee ma gbasie ike izute usoro kachasị na-adịbeghị anya nke gburugburu ebe obibi IT. Usoro zuru ezu anyị nwere taa nke ITIL na-elekọta ndị ọrụ IT na-asọ asọmpi na nha.
Nkọwa okwu nke Ụlọ Ọrụ Ịzụ Ihe Ọmụma Ihe ọmụma, ITIL na-etinye uche na itinye n'ọrụ IT iji mezuo ihe ndị dị mkpa ahịa. Ọ bụ ndokwa maka usoro ịme ihe na-enye aka na ITSM (IT Service Management) ma na-elekọta ụdị, usoro, ọrụ na ndenye ederede na-agbanyeghị nzukọ-karịsịa mana otu nzukọ nwere ike jikọọ maka ịmepụta ụkpụrụ dị iche iche nke otu nzukọ. ITIL na - enye ndị otu aka site na ebe ha nwere ike ịhazi, tụọ ma gosipụta ihe gbanwere.
N'ịbụ ndị a na-ahazi usoro ihe owuwu kachasị mma taa ITIL na-eji ndị ọrụ ilekọta ọrụ IT. Ọ na-enyere onye ahịa ahụ aka itinyekwu aka na ya site na ọrụ ọrụ mgbanwe dị iche iche nke na-enye usoro iwu iji zụọ ahịa ha. Ndị ITIL na-enyere aka na nkwụsịtụ njikọ nke nwere ike itolite na mmelite nke nrụpụta IT site na enyemaka ugbu a iji rụpụta ọrụ mma.
ITIL na-enyere ndị ahịa aka ịgbanwe n'ime ọnọdụ ego na-agbanwe agbanwe na ogo ahịa nke na-emeghe ụzọ maka mmelite ndị ọzọ nke ga-enyere aka mebie mmegbu azụmahịa. Otutu ndi mmadu kwuputara n'uwa dum di ka Microsoft, IBM, abaara uru na-ebute site n'iji ITIL mee ihe n 'ochichi nduzi IT ha.
Ụgwọ dị mma maka ITIL nwere ike inye aka na ndị ọrụ niile ga-arụpụta ihe dị mma maka nzukọ ahụ, ghọtara ịdị ukwuu nke otu, òtù ole na ole na-enye ọzụzụ dị nso nke iji usoro ITIL eme ihe mgbe ụfọdụ na-akwado ndị nnọchianya ha ' Akwụkwọ nke ITIL atụgharị ihe.
Ịkụzi ITIL nwere ike mezuo mgbe ị gụsịrị ọkwa ọkwa n'okpuru n'okpuru:
Ntọala nke ITIL - Dị ka aha ahụ na-atụ aro, nke a bụ ọkwa dị mkpa nke ọzụzụ ITIL. Ịbụ ọkwa kachasị nke akwụkwọ ITIL ọ na-enye ndị ga-eme ya ihe ọmụma nke okwu okwu ma na-enye nhazi usoro dị mkpa maka ọrụ nkwado ITIL. Ọ na-agụnye ihe niile dị mkpa maka ndị ọrụ na-adị ọhụrụ na echiche nke IT.
OLE OZI -Tinyere na 2016, The ITIL Practitioner bụ akụkụ kachasị anya na akwụkwọ ITIL. Site na ITIL practitioner a na-asọmpi ifufe kwụ ọtọ kwesịrị iji kọwaa njikwa nke usoro ITIL iji mechie ahịa achụmnta ego. Igo a na-elekwasị anya na ndị na-aga ọmụmụ ihe na-enwe nchịkwa mgbanwe, nhazi, na nyocha.
Ọkara ọkwa ọkwa ITIL - Ndị a na-eme egwuregwu a ga-enwerịrị ohere ileba anya na modul gbanwere nke primitives nke usoro ITIL dabere na mkpa na ọdịmma ha. Ngalaba abụọ nke modulu jikwaa Ọrụ Lifecycle na Ọrụ Ọrụ. Ọ bụ ezie na ndị gara aga na-agụnye ịmụta usoro nchịkọta dị iche iche dị ukwuu nke akọwapụtara na ITIL ka emesịrị nye atụmatụ dị aghụghọ nke usoro ihe ọmụma.
Ahụmahụ ITIL - Na-agbakwụnye na ama ama ama nke a n'ogo a na-eji ihe ndọtị na oge njedebe nke usoro ITIL na usoro.
ITIL Master - Nke a bụ maka ndị na-eme ihe nchịkwa ndị nwere mmasị na nhazi na njikwa. Ọkwa ikpeazụ nke nkuzi ITIL nke na-eme ka mkpebi ndị ahụ kpebie n'ọhịa ma mee ka ha nwee obi ike iji hụ ezigbo ụlọ.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ITIL nwere uru, ọ ga-erite uru ma ọ bụrụ na ọ na-eme ka ndị mmadụ na-eguzosi ike n'ihe ma na-emekwu nke ọma. Site na ihe di iche iche nke ahia ITIL nwere ike ime ihe ndi ha nwere na nzoputa ha. Ebe ọ bụ na ị bụ anya na anya na mpaghara ndị na-adịghị ike nke nzukọ gị, na onye ITIL kwadoro nke ọma na nchịkwa ị nwere ike ịkwado ha iji ike na nkà ha. Ihe kachasị ihe dị mma bụ na ITIL na-achọpụta na ROI dị mma ma ọ bụ nlọghachi nke ulo oru mbo. Site na ọnụ ọgụgụ buru ibu dị otú a na-atụgharị aka aka, òtù dị iche iche agaghị enwe ike ikwekọrịta nkwekọrịta ITIL. Ihe ngosi ndị a dị ịrịba ama na otu nzukọ agbasawanye mmasị maka ọkachamara ITIL ndị a kwadoro.
Ịbụ usoro ihe omume zuru ụwa ọnụ nke na-achọpụta itinye n'ọrụ na Nhazi IT ọrụ dị iche iche, ọzụzụ ITIL na-enwetara onye omempụ maka ịlụ ọgụ dị mma n'ọhịa. Ịmara banyere mgbanwe na ihe ọhụrụ bụ uru mgbe niile ma nye gị nnukwu ala karịa ndị ọzọ. Ebe ọ bụ na ị maara nkeji nkeji, mgbe ị na-enweta akwụkwọ ịgba akwụkwọ ITIL, ị ga-enwe nsogbu karịa ịbụ ndị edepụtara aha maka ụzọ ọrụ dị irè.
Ihe gbasara mmasị nke ITIL
Ndị ọkachamara IT ndị nwere akwụkwọ ITIL na-asọpụrụ ndị ụlọ ọrụ ndị natara usoro ITIL. Mgbanwe siri ike, n'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ oghere nke ụlọ ọrụ nta na ndị na-ajụ (SMB's) na òtù dị iche iche na-arụ ọrụ na akwụkwọ ITIL. Ndị SMB taa ji obi ha dum na-aghọta atụmatụ nke onye maara akwụkwọ ITIL maka ọganihu ụwa nke ahịa ahịa. Ugbu a, ọ na - agbanye ahịa, ma na SMB gbalịsiri ike ịbanye n'oche ya. Ọ dịghị nzukọ, nnukwu ma ọ bụ obere ga-eche ihu na-enwe mmechuihu ma n'ihi ihe mmefu ego SMB si bụrụ nke kachasị akụkụ adịghị enwe ume nke ịda mbà n'obi, site na oge a gaa n'ihu, ndị a nwere nkwanye ùgwù dị ukwuu nke onye ITIL kwadoro.
Akwụkwọ ikikere ITIL dị ịrịba ama maka ndị nduzi IT na-atụ anya ya, bụ ndị na-ebute ụgwọ ọrụ IT ụbọchị ọ bụla. Ebe ọ bụ, akụkụ buru ibu nke ndị nduzi na-ahụ maka ịmara banyere usoro ọganihu dị na IT, na ogologo oge na-eme ka ha cheta nkwenye nke ITIL. Ha nwere ike ọ gaghị enwe ọganihu ịghọ onye isi ISILI ọbụlagodi ihe dị mkpa nke otu ihe ahụ nwere ike inyere ha aka ịkọwa usoro ITIL.
E wezụga ịbụ onye a na-ewu ewu na onye na-achọkarị ọkachamara na nkwupụta ITIL na-eme ka ụwa dị irè dị ka nke a:
Akwụkwọ nkwado ITIL na-eme ka ihe ntụgharị IT gị dịkwuo nkọ. Ọ bụghị naanị na-enyere gị aka ịmara maka arịrịọ ndị na-agbanwe agbanwe na-arụ ọrụ na-eme ka a gụgharịa ya. Ebe ọ bụ na usoro ITIL bụ ndokwa nke ụzọ ndị gosipụtara na ha na-ejikarị usoro ndị ọzọ, ịkwalite ozi nke ụdị yiri nke ahụ ga-eme ka ndị ọkachamara na-arụ ọrụ ngwa ngwa na nhụjuanya nke ihe dị iche iche na ngwa ngwa.
Onye na-agba akwụkwọ ITIL bụ ezigbo uru maka otu nzukọ na-eme ka ha ruo eruo na ihe ngosi ahụ.
Site n'ịmepụta ọnụ ọgụgụ nke ITIL na òtù ndị a ma ama, asambodo na-eme ka onye nyocha ma na-enye ha nkà maka ịkwalite ọrụ kacha mma na ahịa. Onye nyocha akwukwo nke ITIL nwere oke aka na-edozi mkpebi gbasara akụkụ na ọrụ ha.
ITIL nwere eriri na ISO / IEC 20000 na-egosi ugbu a na ubiquity agaghị aga ebe ọ bụla na nso nso. Tụkwasị na nke a, na ihe karịrị òtù 800 bụ ISO / IEC 20000 kwadoro, mmasị maka ndị ọkachamara ITIL nọgidere na-adị n'elu. Ha na - eguzogide ndị ọzọ n'ihi na ha nwere ike ịmatakwu isiokwu ahụ.
Ezi ITIL ma ọ bụrụ na ọbịbịa nwere ike ịhọrọ ime ihe ize ndụ na ọkwa zuru ụwa ọnụ na-enweghị agbanwe agbanwe akụkọ profaịlụ. Ihe karịrị òtù 10,000 n'ụwa nile anabatala usoro ITIL, mezie ohere maka ọdịnihu ga-emepụta n'ọdịnihu.
Asambodo dị na ITIL na-eme ka ọ ghara ịdị na-akwụ ụgwọ na ọganihu. Onye na-eto eto ITIL nke nwere ezi aka na-enweta ọnụ ọgụgụ dị elu karị ma nweekwa ọkwá dị elu n'ọfịs.
Usoro ihe omuma na ntughari akwukwo ITIL na-emeghe site na otutu usoro ntaneti. Ndị ọzọ na-ewepu akwụkwọ ntụziaka maka ịntanetị na-ewepụ ihe mmụta na nchịkwa na-eme ka klaasị klas na-enyere aka n'ịdị mma ozi nke ITIL. Ọzụzụ nke ITIL nke ndị òtù a kwadoro kwadoro na-egosi na ndị na-achọ mmụọ ime mmụọ site n'ịchọta ihe yiri nke ahụ na-ebute ụzọ kwesịrị ekwesị na ọchịchọ ha.
Dika ma obu obere, nwa akwukwo nke ITIL apughi ime ka o nweghi ohere obula na adighi ike inweta site n'inwe otutu ihe omuma a. Ịgba akwụkwọ na ọkwa dị iche iche nke ọzụzụ ITIL na-enyere onye ọkachamara n'ọchịchị dị iche iche nke gburugburu IT. Ọ ghaghị ịbụ na onye akwụkwọ ITIL kwadoro nke ọma ga-arịgo na steepụ nke ọganihu na ọsọ ọsọ ma mee ka ọ dịkwuo mfe.
Asambodo Oracle - Nduzi zuru ezu